ဇော်ဝင်းထွဋ် သီချင်းများစုစည်းမှု - Software Guide
Home / Myanmar Music / ဇော်ဝင်းထွဋ် သီချင်းများစုစည်းမှု
ဇော်ဝင်းထွဋ် သီချင်းများစုစည်းမှု Reviewed by Ko Lin on 12:53:00 AM Rating: 5
Ko Lin 12:53:00 AM Myanmar Music
ဇော်ဝင်းထွဋ် သီချင်းတွေ တင်ပေးပါဆိုလို့ အဆင်သင့်တင်ထားတာတွေကို
နှစ်သက်ရာကို တစ်ပုဒ်ချင်း ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်......
အခွေလိုက်ဒေါင်းယူချင်တယ်ဆိုရင် အောက်နားဆွဲချပြီး ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
♫ မာကျူရီည ♫
1.လာမယ်ဆိုစောင့်မယ် 2.မာကျူရီည 3.ရော့ယူလိုက် 4.ရှေ့ဆက်ရန်စဉ်းစားပါ 5.မဆွဲနဲ့မတားနဲ့ 6.Sweet Surrender 7.ဆန့်ကျင်ဘက်ရလာဒ် 8. နှစ်ယောက်တည်းကမ္ဘာ 9.အရိုင်းချစ် 10.ထာဝရအလင်း11.အချစ်ရဲ့မိုး/မိုးခေါင်ရေရှားအသည်းနှလုံး
♫ လမ်းသစ် ♫
1.မမုန်းလိုက်နဲ့ 2.အချိန်မှီပြန်ခဲ့တော့ 3.လောကဟင်းလင်းပြင် 4.ဆံပင်တိုတိုအချစ်တိုတို 5.စက်ဝိုင်6း.မင်းကလေးအဓိက 7.အိပ်မက်နတ်သမီး 8.ကူညီပါသီချင်းလေး 9.အဝေးမသွားနဲ့အချစ်ရယ် 10.လမ်းသစ်11.ကောင်းကင်မေမေ 12.အလှဆုံး 13.ချစ်သူနှစ်ယောက်နဲ့ကမ္ဘာကြီး 14.ဘာအလိုရှိတယ်
♫ ကြယ်တံခွန် ♫
1.ရောဂါ 2.ငိုစမ်း 3.ကြယ်တံခွန် 4.စံပယ်ဖြူတွေတောင်ပွင့်ပြီကွယ် 5.ဘာကြောင့်အချစ်ရေအသည်းခွဲတာလဲ6.ကျေနပ်တော့နော် 7.ပျားရည် 8.စမ်းရေအေး 9.ပျော်ရွှင်စေရမယ် 10.စန္ဒီ 11.အိမ် 12.နေပါစေအချစ်လေး13.အားလုံးကောင်း 14.ကိုယ့်ရဲ့ကားကိုမောင်းနေတာဘယ်သူလဲ
♫ အချစ်စွမ်းအင် ♫
1.အမြန်ချစ်လိုက်တော့ 2.ရည်းစားဦးဇာတ်လမ်း 3.အချစ်စွမ်းအင် 4.ရယ်ချင်နေလားမသိဘူးနော်5.နယူတန်ရဲ့တတိယနိယာမ 6.မဟာလူသား 7.အဖော် 8.စိတ်ညစ်ပျောက်ဆေး 9.ရင်ခုန်အချစ်ည 10.ကင်ဆာ11.မနေတတ်ဘူးရူးတော့မယ် 12.နေထွက်ရာအရပ်ကိုမျက်နှာမူ၍ 13.လွမ်းလိုက်တာကွယ် 14.သွားခွင့်ပြုပါဦး
♫ အကောင်းဆုံးတေးများ ♫
1.ကောင်းကင်မေမေ 2.အချစ်ရဲ့မိုး 3.ပျားရည် 4.အဝေးမသွားနဲ့အချစ်ရယ် 5.စက်ဝိုင်း 6.ရောဂါ7.ရည်းစားဦးဇာတ်လမ်း 8.ကြယ်တံခွန် 9.ရော့ယူလိုက် 10.လောကဟင်းလင်းပြင် 11.မာကျူရီည 12.ရဲရဲရင်ဆိုင်13.ဆန့်ကျင်ဘက်ရလာဒ် 14.ဧည့်သည်တစ်ယောက်အကြောင်း
♫ ရှင်သန်ခြင်း ♫
1.စီးကရက်မီးခိုးများ 2.ညကဗျာ 3.ချစ်သူရဲ့သီချင်း 4.အချစ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဇာတ် 5.တနင်္ဂနွေမှာမင်္ဂလာဆောင်မယ်6.သံသရာစမ်းရေ 7.ဘ၀သခင် 8.ရှင်သန်ခြင်း 9.ပင်လယ်ပြင်သင်္ဘောမှောက်ခြင်း 10.ဒီလိုသေချာတယ်11.လမင်းလေးသန်းခေါင်ယံ 12.ကိုကင်း 13.အချစ်ရဲ့အချိုရည်အားများ 14.ရန်များကိုကိုယ်ရှင်းမယ်
♫ ရှင်သန်ခြင်း (၂)♫
1.လူငယ်လေးတစ်ယောက်အကြောင်း 2.စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ 3.အရက်ချိုအချစ်ခါး 4.အရည်တွေပျော်ကုန်ပြီ 5.သူလေ6း.ရွှေရောင်အိပ်မက်များ 7.ပုံရိပ်များ 8.ရွက်လွှင့်ခြင်း 9.အဟောင်းနဲ့အသစ် 10.ရေလိုတယ် 11.အသက်ရှုမှား12.အချစ်သီချင်းရိုးရိုးလေးတစ်ပုဒ် 13.သင်္ခါရတရားရဲ့အရသာ 14.ရှင်သန်ရဲ
♫ ရာဇ၀င် ♫
1.အချစ်ဒဏ်ရာ 2.ဂန္ဓာရီ 3.စိတ်အမာရွတ်များ 4.အဖော် 5.အရိပ်ရဲအရိပ် 6.မျဉ်းဖြောင့်၏ကွေ့ကောက်ခြင်း 7.ရာဇ၀င်8.ပဲရစ်မြို့ကိုပြန်ယူသွား 9.အချစ်နဲ့ဘ၀ 10.တစ်နာရီသီချင်း 11.ဆူးလေး 12.အသည်းကွဲအနမ်း
♫ ရွက်လွှင့်ခြင်း ♫
1.ဧည့်သည်တစ်ယောက်အကြောင်း 2.သွေးတိတ်တေး 3.စီးကရက်မီးခိုးများ 4.အချစ်အတု 5.ဒီလိုသေချာတယ်6.ရန်များကိုကိုယ်ရှင်းမယ် 7.အရက်ချိုအချစ်ခါး 8.ချစ်သူရဲ့သီချင်း 9.အချစ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဇာတ်10.အရည်တွေပျော်ကုန်ပြီ 11.ရွက်လွှင့်ခြင်း 12.ပင်လယ်ပြင်သင်္ဘောမှောက်ခြင်း 13.အသစ်ကပြန်စ14.အချစ်တွေမပြိုလဲနဲ့
♫ လျှပ်စစ်မိုးကောင်းကင် ♫
1.အသည်းကွဲမြို.တော် (ဂျေမောင်မောင်) 2.ထွက်မသွားနဲ. (ဂျေမောင်မောင်) 3.ပထမဆု (ဇော်ဝင်းထွဋ်) 4.ဂန္တ၀င်စိမ်း (ဇော်ဝင်းထွဋ်) 5. နှလုံးသားရဲ.ကျန်းမာရေး (ချစ်ကောင်း) 6.အဆွေးလမ်းပေါ်မှာ (ချစ်ကောင်း)7.စိတ်ကူးတောင်ပံများ (ဂျေမောင်မောင်) 8.အကုန်သာယူလိုက် (ဇော်ဝင်းထွဋ်) 9.အတူတူနေလိုက်စို့ (ချစ်ကောင်း)10.အဓိကကွက်လပ် (ချစ်ကောင်း) 11.မမဆိုး (ချစ်ကောင်း) 12.အလွမ်းညရဲ့အသံ (ဂျေမောင်မောင်)13.အရွယ်လွန်အချစ် (ဇော်ဝင်းထွဋ်) 14အစမ်းသပ်ခံအသည်းနှလုံး (ဇော်ဝင်းထွဋ်). 15.စဉ်းစားကြည့် (ဂျေမောင်မောင်)
♫ လျှပ်စစ်မိုးကောင်းကင် (၂) ♫
1.ရွက်လွှင့်ခြင်း 2.ရန်များကိုကိုယ်ရှင်းမယ် 3.ပင်လယ်ပြင်သင်္ဘောမှောက်ခြင်း 4.ဒီလိုသေချာတယ်5.အရက်ချိုအချစ်ခါး 6.အချစ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဇာတ် 7.အရည်တွေပျော်ကုန်ပြီ 8.အသစ်ကပြန်စ 9.အချစ်အတု10.စီးကရက်မီးခိုးများ 11.ဧည့်သည်တစ်ယောက်အကြောင်း 12.ချစ်သူရဲ့သီချင်း 13.သွေးတိတ်တေး14.အချစ်တွေမပြိုလဲနဲ့
♫ ရှေ့ပြေး ♫
1.သံထည်လိုခိုင်မာစေ 2.ဘာကြောင့်အချစ်ရေအသည်းခွဲတာလည်း 3.လာမယ်ဆိုစောင့်မယ်4.မနေတတ်ဘူးရူးတော့မယ် 5.ဆွဲအား 6.မောဟစားသူများ 7.ပုံရိပ်များ 8.ရှေ့ပြေး 9.မှတ်မိသေးရဲ့လား10.မီးတောက်အနမ်းများ 11.စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ 12.သူလေး 13.အသစ်တစ်ဖန် 14.ကျေနပ်တော့နော်
♫ လျှပ်စစ်သံစဉ်များ ♫
1.ရှေ့ဆက်ရန်စဉ်းစားပါ 2.မှတ်မိသေးရဲ့လား 3.ဂန္ထ၀င်စိမ်း 4.အရွယ်လွန်အချစ် 5.လမ်းရွေးခွင့်6.အစမ်းသပ်ခံအသည်းနှလုံး 7.မီးတောက်အနမ်းများ 8.ပထမဆု 9.ကန္တာရခရီးသည် 10.ကြိုက်ရင်အကုန်ယူလိုက်11.တားဆီးလို့မရနိုင်တာအချစ် 12.အဆင်ပြေရမယ် 13.အချစ်တဲ့လား 14.မျိုးဆက်သစ်သီချင်း
♫ နေရာသစ် ♫
1.အသည်းကွဲရေဒီယို 2.ခြောက်ခမ်းသွားတဲ့အိပ်မက်မြစ် 3.ခရီးသည်နှစ်ဦး 4.ပျက်သုန်းခြင်း 5.အဝေးပြေ6း.အလိုအပ်ဆုံးသဘောထား 7.အနိုင်အရှုံး 8.နေရာသစ် 9.မင်းအတွက် 10.အမြင့်ပျံသမား 11.သေစေနိုင်တယ်12.ရင်ထဲမှာမင်းကရှိနေပြီးသား 13.သွေးသစ်သီချင်း 14.သက်တမ်းမဲ့
♫ ခရီးသွားမီးခိုးတန်းများ ♫
1.ခရီးသွားမီးခိုးတန်းများ 2.အချစ်သေနတ် 3.လှပတဲ့အဆိပ် 4.အားများ 5.နက်ရှိုင်းခြင်း 6.လျှို့ဝှက်လွန်းတယ်7.ဒီကမ္ဘာမှာ 8.မင်းလေးအတွက် 9.အချစ်အတွက်အရက်တစ်ခွက် 10.ကိုယ့်ရဲ့သီချင်းလေး 11.အမှိုက်များ 12.ချယ်ရီ
♫ အသစ်ကပြန်စ ♫
1.အချစ်အတု & သူလေး 2.ဧည့်သည်တစ်ယောက်အကြောင်း 3.ကောင်းကင်မေမေ 4.စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့5.မင်းလေးအဓိက 6.လာမယ်ဆိုစောင့်မယ် 7.ရှင်သန်ခြင်း 8.ရောဂါ 9.ရွက်လွှင့်ခြင်း 10.ရွှေရောင်အိပ်မက်များ11.အချစ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဇာတ် 12.ဘာကြောင့်အချစ်ရေအသည်းခွဲတာလဲ 13.ကိုကင်း 14.သံထည်လိုခိုင်မာစေ15.အသစ်ကပြန်စ
♫ ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာ ♫
1.သွားကြပါစို့ 2.အပေါ်ထပ်နဲ့အောက်ထပ်ဇာတ်လမ်း 3.ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာ 4.ပညတ်တော်ဆယ်ပါး5.မယ်သီတာခိုးတာဘယ်သူလဲ 6.အချွဲမလေး 7.ယုဇနပင်နဲ့ဖဲကြိုးဝါ 8.စိတ်တေလေ 9.ဂေါ်လီမလေး10.အိမ်လိုက်ခဲ့ပါရည်းစားချော 11.ကပ္ပလီမလေး 12.မူယာမာယာမိုး 13.ဖက်ရှင်မလေး
♫ ဂျစ်ပဆီမိုးတိမ် ♫
1.အသည်းနှလုံးငြိမ်းချမ်းရေး 2.အားလုံးမှားယွင်း 3.ချစ်ရမ္မက် 4.ဂျစ်ပစီမိုးတိမ် 5.I Don’t Want To Talk About It6.လိပ်ပြာ 7.မင်းအခန်းမင်းပြန်ဦး 8.နေရစ်ခဲ့လေ 9.ငါ့ကိုအတောင်ပံတွေပေး 10.နွံနစ်ခြင်း11.အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အဘိဓမ္မာ
♫ မဟာ ♫
♫ ရော့ခ်အင်ရိုးသင်္ကြန် ♫
1.ဖြူနီဝါပြာ 2.တို့တွေမြူမယ် 3.ကဲနေပြီ 4.အကြိုနေ့မနက် 5.လျှောက်လည်မယ် 6.အချမ်းပြေ7.ရော့ခ်အင်ရိုးကောင်မလေး 8.မြူးမယ် 9.အဖြစ်အပျက်ကသိပ်မြန် 10.ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ့သက်သေ 11.လျှပ်စစ်ညဗီးနပ်စ်12.ကာရံလေး 13.စောင့်နေတဲ့ရာသီ
♫ ရောင်စုံသင်္ကြန် ♫
1.မြန်မြန်လေးလောင်း 2.ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာ (Remix Version) 3.ဖြူနီပြာဝါ 4.မရုန်းနဲ့5.သင်္ကြန်ပဲ 6.ကဲနေပြီ7.ရေတွေကုန်သွားအောင်ပက် 8.အဟောင်းတိုင်းအသစ် 9.အချွဲမလေး 10.ပိတောက်များနဲ့ တစ်ယောက်တည်း
♫ မျှော်လင့်ခြင်းခရီးသည် ♫
1.လိုအပ်ချက်တစ်ခု 2.အမုန်းစစ်မျက်နှာများ 3.မျှော်လင့်ခြင်းခရီးသည်များ 4.အစွန်းရောက် 5.နှောင်ကြို6း.မင်းလေးလှုပ်ရှား 7.ဘာမှမသေချာဘူး 8.အနှိုင်းမဲ့ 9.သဘာဝတေးသွား 10.ယုံလား
♫ ဆေးပေါင်းခတဲ့ည ♫
1.ပြေးလမ်းဆုံး 2.မနက်ဖြန်ရဲ့လမ်းများ 3.ဆေးပေါင်းခတဲ့ည (၁) 4.သတ္တုရဲ့မြစ်ဖျား 5.05.Brother John's Short Visit 6.ငွေကျည်ဆန် 7.ဆေးပေါင်းခတဲ့ည (၂) 8.အချစ်စက်အပျက်ကြီး 9.လူမှား 10.Rock ‘N’ Roll ဘ၀11.လွန်လေပြီးတဲ့အချစ်များ 12.တစ်မူးသာ
♫ အချစ်များသူ့ဆီမှာ ♫
1.ကောင်းကင်ရဲ့အလင်း 2.နှောင်ကြိုး 3.အချစ်နဲ့ဘ၀ 4.ဖန်ဆင်းသူ 5.တားဆီးလို့မရနိုင်တာအချစ်6.အစမ်းသပ်ခံအသည်းနှလုံး 7.မင်းလေးအတွက် 8.အနှိုင်းမဲ့ 9.အချစ်များသူ့ဆီမှာ 10.ရှင်သန်ခြင်း
♫ အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား ♫
1.အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား 2.ငွေလုပ်တဲ့စက် 3.အသက်မဲ့စိမ်းလန်းခြင်း 4.ဒဏ်ရာရထား 5.ဒွိဟ 6.လမ်းကလေး7.လောင်းကစားပွဲ 8.မင်းတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး 9.ငါသည်မီးတောင် 10.ရေစိုနေတဲ့စကားများ11.အချစ်များသူ့ဆီမှာ 12.သဘာဝတေးသွား
♫ အမုန်းမြို့ရဲ့အဝေးမှာ ♫
1.ဝေးလေကောင်းလေပဲ 2.ကြယ်တွေကိုအိပ်မက်ခြင်း 3.မောပြီ 4.အမုန်းမြို့ရဲ့အဝေးမှာ 5.အချစ်ကိုသင်ကြာ6း.မင်းမရှိတဲ့နေ့များ 7.ကမ္ဘာကြီးကကျဉ်းကျဉ်းလေး 8.စီးဆင်းတဲ့သီချင်း 9.အပြာရောင်ဓာတ်ပြားဟောင်း10.လောင်စာလိုတယ် 11.မိုင်တိုင်များ
♫ အသစ်တစ်ဖန် ♫
1.ရှင်သန်ရဲရဲ 2.မင်းအခန်းမင်းပြန်ဦး 3.နေရစ်ခဲ့လေ 4.အချစ်ရဲ့အချိုရည်အားများ 5.ပင်လယ်ပြင်သင်္ဘောမှောက်ခြင်6း.ခေတ်ဟောင်းမင်းသားကြီး 7.အသစ်တစ်ဖန် 8.အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အဘိဓမ္မာ 9.ရွက်လွှင့်ခြင်း10.ရန်များကိုကိုယ်ရှင်းမယ် 11.ဂျစ်ပစီမိုးတိမ်
♫ ပြတိုက်ထဲကနေ့ ပြတိုက်ထဲကည ♫
1.ပြတိုက်ထဲကနေ့ ပြတိုက်ထဲကည 2.အမုန်းများရပ် 3.တစ်ခါကလို 4.ကျာပွတ်များ 5.မဖြစ်ချင်ဘူး မပျက်ချင်ဘူ6း.မြင်နေခွင့်ပြုပါ 7.ဓားသန်လျက်နဲ့ ပျားရည်စက် 8.အပေါင်းနဲ့အနှုတ် 9.ရွှေပြည်တော်မဝေးတော့ဘူး10.စိတ်မချနိုင်ဘူး 11.အထိမ်းအမှတ်သီချင်း 12.နှုတ်ဆက်ခြင်း
♫ တစ္ဆေလမ်း ♫
1.တစ္ဆေလမ်း 2.ဦးနှောက်တွေစားတယ် 3.ရဲရင့်တဲ့သီချင်း 4.ကြိုနေတဲ့လမ်းများ 5.အိမ်မက်သစ်တစ်ခု 6.Chevrolet7.ပြန်လည်မွေးဖွားဖြင်း 8.မန္တလေး 9.အထီးကျန်မြို့ 10.ဒီအချစ်များ 11.ငါ့ဂီတ 12.ခင်ဗျားရဲ့အကြောင်း
♫ အဆုံးမရှိ ♫
1.ဒီအချိန်တော့လွမ်း 2.မဟာတံတိုင်းကြီး 3.ထစ်ချုန်းမိုး (၂) 4.အဆင်မပြေဘူး 5.အက်ဆစ်လိုအမုန်းများ 6.ဘ၀7.၀ဋ်ကြွေး 8.ဘ၀တစ်ခုအချစ်တစ်ခု 9.အဖြူရောင်အခန်း 10.အဆုံးမရှိ 11.သင်းကွဲ 12.အထိမ်းအမှတ်နေ့
♫ လူ ♫
1.ခွဲခွာ 2.အဆုံး 3.လေးနက်ပေးပါ 4.ရေလိုက်ငါးလိုက် 5.တချို့ 6.မင်းလေးအတွက် 7.လူ 8.အကောင်းဆုံး9.လိုက်နိုင်မလား 10.မနေ့က 11.ဒဏ်ရာဟောင်းများနဲ့ည 12.Rock 'n' Roll Show
♫ ထစ်ချုန်းမိုး ♫
1.ထစ်ချုန်းမိုး ~ (ဇော်ဝင်းထွဋ် ~ မျိုးကျော့မြိုင်) 2.အက်စစ်လိုအမုန်းများ ~ (ဇော်ဝင်းထွဋ်)3.အနားမှာဘယ်သူရှိမလဲ ~ (ရင်ဂို) 4.အစိမ်းရောင်နေ့ရက်များ ~ (ဟယ်ရီလင်း) 5.၀ဋ်ကြွေး ~ (ဇော်ဝင်းထွဋ်)6.မင်းနဲ့အတူ ~ (မျိုးကျော့မြိုင်) 7.မေ့ထားလိုက် ~ (ရင်ဂို) 8.အသွင်ပြောင်းမဲ့ည ~ (ဟယ်ရီလင်း) 9.ထစ်ချုန်းမိုး ~ (ဇော်ဝင်းထွဋ် ~ မျိုးကျော့မြိုင်)
♫ မိုးထဲ ♫
1.အထီးကျန်ချိန် 2.အဆွေးများနဲ့ရင်ဘတ် 3.မာယာတစ်သိန်း 4.မင်းလိုက်ရဲပါစေ 5.ချစ်ခွင့်6.ပျက်စီးသွားသောအိမ်မက်အပိုင်းအစများ 7.တစ္ဆေခြောက်တဲ့ည 8.ကျေးဇူးနေခြည် 9.၀ိုင်ချိုချို အချစ်ခါးခါး 10.မိုးထဲ11.သန်းခေါင်ယံနတ်သမီး
♫ အ၀ါရောင်လမ်းကလေး ♫
1.ပြောလိုက်ပါလား – ကော်နီ 2.အ၀ါရောင်လမ်းကလေး – ဇော်ဝင်းထွဋ် 3.ရှင်းခဲ့ပါဦး – မီမီဝင်းဖေ 4.တစ်စုံတစ်ရာ – ချစ်ကောင်း 5.နတ်ဆိုးလေး – မီမီခိုင်မင်း 6.အလွမ်းည – ဂျေမောင်မောင် 7.ကျေးလက်ခရီးလေး – မေခလာ8.၀ိုင်အချစ် – ပိုးဒါလီသိန်းတန် 9.အတွေး – ခိုင်ထူး 10.မင်းသားလေး – နီနီလေး 11.ဒီတစ်ကြိမ် ဒီနွေ – ခင်မောင်တိုး 12.မိုးတိမ် နှစ်ယောက် – သန္တာဦး 13.အမှတ်တရအကြောင်း – တူးတူး 14.ဝေးလည်းမေ့မသွားဘူး – ဟေမာနေ၀င်း
Thanks To: www.songloverr.blogspot.my
၁၉၈၄ဇော်ဝင်းထွဋ် - ကြယ်တံခွန်
၁၉၈၈- ဇော်ဝင်းထွဋ် - အကောင်းဆုံးတေးများ
၁၉၈၉  - ဇော်ဝင်းထွဋ် - Rock တစ္ဆေ
၁၉၉၀ - ဇော်ဝင်းထွဋ် - လျှပ်စစ်မိုးကောင်းကင် (ချစ်ကောင်း၊ဂျေမောင်မောင်)
၁။ အသည်းကွဲမြို.တော် (ဂျေမောင်မောင်)
၂။ ထွက်မသွားနဲ. (ဂျေမောင်မောင်)
၃။ ပထမဆု (ဇော်ဝင်းထွဋ်)
၄။ ဂန္တ၀င်စိမ်း (ဇော်ဝင်းထွဋ်)
၅။ နှလုံးသားရဲ.ကျန်းမာရေး (ချစ်ကောင်း)
၆။ အဆွေးလမ်းပေါ်မှာ (ချစ်ကောင်း)
၇။ စိတ်ကူးတောင်ပံများ (ဂျေမောင်မောင်)
၈။ အကုန်သာယူလိုက် (ဇော်ဝင်းထွဋ်)
၉။ အတူတူနေလိုက်စို့ (ချစ်ကောင်း)
၁၀။ အဓိကကွက်လပ် (ချစ်ကောင်း)
၁၁။ မမဆိုး (ချစ်ကောင်း)
၁၂။ အလွမ်းညရဲ့အသံ (ဂျေမောင်မောင်)
၁၃။ အရွယ်လွန်အချစ် (ဇော်ဝင်းထွဋ်)
၁၄။ အစမ်းသပ်ခံအသည်းနှလုံး (ဇော်ဝင်းထွဋ်)
၁၅။ စဉ်းစားကြည့် (ဂျေမောင်မောင်)
ဇော်ဝင်းထွဋ် - လျှပ်စစ်မိုးကောင်းကင် (၂)
ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ ဂျေမောင်မောင်၊ ချစ်ကောင်း - လျှပ်စစ်မိုးကောင်းကင်(၂)
၀၁။ အဆင်ပြေရမယ် (ဇော်ဝင်းထွဋ်)
၀၂။ ချစ်သူ (ချစ်ကောင်း)
၀၃။ မုန်းမေ့ဖို့ခက်တယ် (ဂျေမောင်မောင်)
၀၄။ ကန္တာရခရီးသည် (ဇော်ဝင်းထွဋ်)
၀၅။ မျက်စိမှိတ်ချစ်လိုက်တယ် (ချစ်ကောင်း)
၀၆။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေး (ဂျေမောင်မောင်)
၀၇။ မျိုးဆက်သစ်သီချင်း (ဇော်ဝင်းထွဋ်)
၀၈။ ကျွန်တော့်သီချင်း ကျွန်တော့်အကြောင်း (ချစ်ကောင်း)
၀၉။ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ကာ (ဂျေမောင်မောင်)
၁၀။ အချစ်တဲ့လား (ဇော်ဝင်းထွဋ်)
၁၁။ အရင်လိုပြန်ချစ်လိုက် (ချစ်ကောင်း)
၁၂။ နောက်ကောက် (ဂျေမောင်မောင်)
၁၃။ အဆင်မပြေတာတွေများ (ဇော်ဝင်းထွဋ်)
၁၄။ အကောင်းဆုံးနှလုံးသား (ချစ်ကောင်း)
၁၅။ မင်းနဲ့နေချင်ပြီ (ဂျေမောင်မောင်)
၁၉၉၅ - ရော့ခ်အင်ရိုးသင်္ကြန် (VA)
၁၉၉၆ - ရောင်စုံသင်္ကြန် (Emperor)
၂။ ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာ (Remix Version)
၄။ မရုန်းနဲ့ 
၁၀။ ပိတောက်များနဲ့ တစ်ယောက်တည်း
၁၉၉၆ - ပဲ့ကိုင်ရှင် (ရုပ်ရှင်သီချင်းများ)
၁၉၉၇ Emperor သင်္ကြန်သီချင်းများ (ဇော်ဝင်းထွဋ် ၊ဟယ်ရီလင်း ၊ရင်ဂို ၊စည်သူလွင်)
၁၉၉၇ ဇော်ဝင်းထွဋ် - Unplugged Live
၁၉၉၇ - ရေစီးသံ (ဇော်ဝင်းထွဋ် ၊ ဂျေမောင်မောင် ၊ ချစ်ကောင်း)
၁။ ရုန်းလို့မရတော့ဘူး - ဇော်ဝင်းထွဋ်
၂။ ရေစီးသံ - ဂျေမောင်မောင်
၃။ မျက်ရည်စီးချင်း - ချစ်ကောင်း
၄။ ဖယ်စမ်းပါ - ဇော်ဝင်းထွဋ်
၅။ ကိုယ်တိုင်ခံစားမှ - ဂျေမောင်မောင်
၆။ ပန်းလေး - ချစ်ကောင်း
၇။ တစ်ယောက်ရှိမယ် - ဂျေမောင်မောင်
၈။ ခြောက်သွေ့လွန်းတဲ့နေ့ရက်များ - ချစ်ကောင်း
၉။ လမ်းတွေဆုံးအောင်လျှောက် - ဇော်ဝင်းထွဋ်
၁၀။ နံနက်ခင်းနှင့်အတူ - ဂျေမောင်မောင်
၁၁။ အသည်းကွဲနာရီ - ချစ်ကောင်း
၁၂။ ကမ္ဘာဟောင်းနေ့ - ဇော်ဝင်းထွဋ်
၁၉၉၉ - ဇော်ဝင်းထွဋ် - နေ့သစ်တွေထဲမှာ (ဟေမာနေ၀င်း)
ဇော်ဝင်းထွဋ် (ပြတိုက်ထဲကနေ့ ပြတိုက်ထဲကည)
၂၀၀၉ - ဇော်ဝင်းထွဋ် ( မိုးထဲ )
ဇော်ဝင်းထွဋ် - အကောင်းဆုံးတေးများ
ဇော်ဝင်းထွဋ်, ရင်ဂို ,စည်သူလွင် ,သီရိဂျေမောင်မောင်
ဒီနှစ်ကူးမှာ ကဲနေပြီ (VA)
သမန်းကျား - ဖရန်ကို
ပဲပြုတ် - မင်းဂေါင်
စေလိုရာစေ - ဇော်ဝင်းထွဋ်
ပုစ္ဆာဆန်သောမိန်းကလေး - စည်သူလွင်
မိန်းကလေးကစရမှာလား - ဟေမာနေ၀င်း
ချစ်သောမောင်မောင် - ချောစုခင်
ဘယ်ပန်းချီရေးလို့မမှီ - ဟယ်ရီလင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစိန်ခေါ်ချင်တယ် - ရင်ဂို
လွမ်းငွေ့တဝေေ၀ - ညီပု
မီးပုံပွဲ - Group
ဇော်ဝင်းထွဋ် - အားနည်းချက်
ဇော်ဝင်းထွဋ် - အ၀ါရောင်လမ်းကလေး
VA - မီးမုန်တိုင်း
Emperor သင်္ကြန်သီချင်းများ (ဇော်ဝင်းထွဋ် ၊ဟယ်ရီလင်း ၊ရင်ဂို ၊စည်သူလွင်)
CLEAR   WATER   FESTIVAL   REVIVAL
ဇော်ဝင်းထွဋ် (နှစ် ၂၀ ရှင်သန်ခြင်း) Live Show
ဇော်ဝင်းထွဋ် - ခွန်အားဖြည့်မိငယ်
ဇော်ဝင်းထွဋ် - ခြင်္သေ့လည်ပြန်
နေရာသစ် - ဇော်ဝင်းထွဋ်
Thanks To: www.kyawkokolin.blogspot.my